Cabashada mucaaradka iyo cagajiidka dowladda ee arimaha doorashada dalka | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Cabashada mucaaradka iyo cagajiidka dowladda ee arimaha doorashada dalka
Cabashada mucaaradka iyo cagajiidka dowladda ee arimaha doorashada dalka
Bilihii September & October 2020 waa markii dhinac loo riday doorashada dalka 20/21, kadib muddo dheer oo muran iyo jaho wareer uu hareeyay nuuca doorasho, waqtiga ay dhaceyso & isla jaanqaadka DFS & DG.
Doorashadu waxa ay dhadhan yeelatay markii loo gudbiyay Labada Gole ee BFS 26-Kii September 2020 oo waxaa u codeeyay heshiiska Dowladda Federaalka & Dowlad Goboleedyada 252-mudane oo katirsan labada Aqalka Baarlamaanka.
1-dii October 2020, Madaxda heer federaal & heer Dowlad Goboleed waxa ay heshiis ka gaartay sida loo jadwaleynayo, waana howsha ugu muhiimsan, maadaama habraaceeda waa tan muujineysa waqti ku qabashada doorashada & dib u dhac haddii uu ku yimaado.
Qaybtii ugu horeysay ee Jadwalka oo ahayd soo gudbinta xubnaha Guddiga farsamada & xalinta Khilaafaadka oo ku beegneed 10-ka ilaa 20-ka October 2020 waxaa kaliya kasoo baxay Jubbaland iyo Koofur Galbeed.
Bilawgii bishan waxa uu qorshuhu ahaa in la guda galo xareynta Odoyaasha dhaqanka, Ergada dooraneysa Golaha Shacabka & tababar aqoon kororosiga la siinayo wax doortayaasha & guddiga qudhiisa, balse taas ma dhicin.
1-da ilaa 10-ka December 2020, waa waqtiga loo jaangooyay doorashada kuraasta Senatarada Aqalka sare ee BFS oo waa ka howl fudud yahay doorashada Golaha Shacabka, maadaama Dowlad Goboleedyada ay dooranayaan Senatarada.
Sheekadu waxa ay qaraar gaartay markii xubnaha Guddiga doorashada intooda badan xubnaha mucaaradka ah ay sheegeen in laga soo dhex xulay Nabadsugidda, Madaxtooyada & Shaqaalaha rayidka ah.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa beeniyay in xubno katirsan Nabadsugidda ay ku jiraan Guddiga Doorashada 20/21, isaga oo dalbaday in lasoo bandhigo haddii la hayo caddeymo ku saabsan dadkaas.
Shacabku waa marqaati aamusan, waayo meel ay kasoo galaan oo u bannaan uma muuqata, qaar kood ayaa ku tilmaamay jaho wareer siyaasadeed, maadaama hadallo xanaf leh ay isu adeegsanayaan.
Haddaba, Suuragal ma tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho ay isu calool furan yihiin Muxaafid & Mucaarad?